अमेरिकामा उपराष्ट्रपति भएकी कमला को हुन् ? यस्तो थियो उनको संर्घष - NewsCenterNepal.com
अमेरिकामा उपराष्ट्रपति भएकी कमला को हुन् ? यस्तो थियो उनको संर्घष
अमेरिकामा ४६ औं राष्ट्रपतिका रूपमा जो बाइडेन चुनिएका छन्। यो जितसँगै डेमोक्र्याटिक पार्टीकी कमला ह्यारिस अमेरिकाकै पहिलो महिला उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएकी छन्।
अमेरिकी निर्वाचनमा इतिहास बनाउन सफल कमला को हुन् त?भारतीय मूलकी कमला ह्यारिसलाई चिन्न उनकी आमा चिन्नुपर्छ।
कमलाले अधिकार र कर्तव्यको चेत हुर्कने क्रममै आमाबाटै पाएकी थिइन्। उनकी भारतीय आमाले उतिखेरै अधिकारका लडाइँहरूमा छोरीलाई च्याप्दै अघि बढेकी थिइन् भने जीवनमा गुनासो होइन काम गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने पाठ पनि घोकाएकी थिइन्।
सन् १९६० दशक उदय हुँदै गर्दा बर्क्लेस्थित युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियामा ह्यारिसका आमाबुवा विद्यावारिधि गरिरहेका थिए। त्यतिबेलै उनीहरू एकअर्कासँग नजिकिए। जमाइकाबाट आएका पिता डोनाल्ड ह्यारिस अर्थशास्त्रका विद्यार्थी थिए।
कमलाले आफ्ना लेखहरूमा प्रहरीले पानीको फोहोरा प्रयोग गर्दा आफ्ना आमाबुवाको भागाभाग, आन्दोलनकारी विद्यार्थीको प्रतिकार र एकपटक त हिंसा भड्किँदा भावी सिनेटर (आफू)लाई कसरी दौडेर ज्यान जोगाउन लगाइएको थियो भन्ने वृत्तान्त उल्लेख गरेकी छिन्।
किशोर अवस्थामा हुँदा कमलाकी आमाले अन्यत्र जागिर पाएपछि यो परिवार मोन्ट्रियल सरेको थियो। त्यतिबेलै कमलाले आफूमा कसरी परिवर्तन ल्याउने भनेर खोजी थालिन्। घरबाहिरको चौरमा फुटबल खेल्न गरिएको निषेधलाई दिदीबहिनी मिलेर प्रतिवाद गरे। त्यो प्रतिवादपछि नियमै फेरिएको कमलाले बताएकी छन्।हाइस्कुलको पढाइ सकिनेबित्तिकै कमलाले वकिल बन्न अगाडिको पढाइ तयारी गरिन्।
यी प्रत्येक कदममा कमलाका साथीहरूले उनलाई एकोहोरो भएर आमाबावुकै पथमा लम्किरहेका पाए। पहिलोपटक चुनावमा होमिएकी कमलाको प्रचारप्रसारमा एकसाथ घुँडा धसेर लाग्दादेखिको सम्झना एन्ड्रिया ड्युसँग छ।
‘उनी सदैव आमाको चर्चा गरिरहन्थिन्,’ एन्ड्रिया भन्छिन्, ‘आमा ज्युँदो हुँदा त शक्तिको श्रोत नै थिइन् भने दिवंगत भएपछि पनि उत्तिकै बलियो श्रोत बनिरहेकी छिन्।’कमलाकी आमा बितेको एक दशक नाघिसकेको छ।
उनले आफ्नो दर्शनलाई आमाले देखाएको उदाहरणमै उभ्याएकी छन्– हरेक दिन स-साना पाइला चाल्दै ठूलो लक्ष्यका लागि आफूलाई केन्द्रित गरिरहने।
कमलाकी मावली हजुरआमाले पनि घरेलू हिंसाका पीडितलाई साथ-सहयोग दिनुका साथै उतिबेलाको भारतीय समाजमा महिलाहरूलाई गर्भनिरोधकका बारेमा जानकारी दिएकी थिइन्। त्यसैगरी मावली हजुरबुवा भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा लड्नुका साथै कुटनीतिज्ञसमेत बनेका थिए। भारतमा अंग्रेज शासन अन्त्यपछि हजुरआमा-हजुरबुवा जाम्बियामा बसेर शरणार्थी व्यवस्थापनमा संलग्न भएका थिए।
कमलाकी आमा क्यानाडाबाट फर्केपछि लरेन्स बर्क्ले नेशनल ल्याबोरेटरीमा काम गरेकी थिइन् जसका हाकिम थिए जो ग्रे। ती पाँच फिट एक इन्चकी महिला आफ्नो कार्यालयमा आएपछि प्रभावशाली व्यक्तित्वको प्रभावले कसरी कार्यकक्षलाई फेरिदिएकी थिइन् भनेर जो अहिले पनि सम्झना गर्ने कोशिस गर्छन्जो अहिले ओरेगन हेल्थ एन्ड साइन्स युनिभर्सिटीका प्राध्यापक छन्।
‘म टिभीमा हेरिरहेको छु, कमलाम पनि श्यामला गोपालनको प्रत्यक्ष गुण र सामाजिक न्यायका पक्षपोषण प्रतिबिम्वित भइरहेको देख्दैछु,’ उनी भन्छन्, ‘म त उस्तै पो महशुस गरिरहेको छु।’
अब्रे लेब्रीका अनुसार कमलाले सिनेटको पदभार ग्रहण गर्ने समारोहमा बुवाले उपस्थिति जनाए पनि छोरीको चुनावी प्रचारमा उनको उपस्थिति देखिएको थिएन। यसका पछाडि त्यो गाँजाकै विवाद कारक रहेको उनी अनुमान लगाउँछन्।’बाबुछोरीको सम्बन्धमा अन्तिम धक्का त्यही घटनाले लगाएजस्तो लाग्छ,’ उनले भने।
आफ्नो जीवनमा आमाको एक्लो प्रभावकै कारण आमाको मृत्यु कमलाको निम्ति निकै कष्टकर बनेको थियो। छोरीको प्रारम्भिक चुनावी प्रचारमा सक्रिय गोपालनले पछिल्लो चरण देख्नै पाइनन्। कमला अहिले पनि आमालाई बारम्बार याद गरिरहने बताउँछिन्।’मेरो अहिले पनि गला अवरुद्ध हुन्छ,’ उनले गत वर्ष एउटा अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइन्, ‘आमाको मृत्युको जतिसुकै समय बिते पनि त्यसले केही फरक नपार्ने रहेछ।’
‘यो साता आमा यहाँ हामीसँग भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुराले असाध्यै छटपटी भइरहेको छ,’ कमलाले भनेकी थिइन्। जिल्ला न्यायाधिवक्ता भएर सपथ लिँदै गर्दा आफ्नो छेवैमा गर्वसाथ आमा खडा भएको तस्बिर उनले सँगालेर राखेकी छन्।
‘म श्यामला गोपालन ह्यारिसकी छोरी हुँ भन्ने भन्दा संसारमै मेरो निम्ति ठूलो अर्को कुनै पद वा उपाधि छैन,’ उनले लेखेकी छन्, ‘मैले सबभन्दा साँचेर राखेको जीवनकै प्यारो सत्य पनि यही हो।’
पाल्पामा पौडी खेल्ने क्रममा एक जनाको मृत्यु